Izindaba - Umqondo othile mayelana namata weti yelineni
Linen yoga mat is a yoga mat with lines. Iguqulwa ngesisekelo soqobo lwendabuko lwe-yoga. Isebenzisa i-orthographic yoga system ukufaka umlawuli engqondweni yomfundisi we-yoga ebusweni bomsizi ukusiza abasebenza ukwenza ama-yoga asanas afanele. Kuyasiza futhi kumfundisi ukuthi aqondise kangcono ama-asanas angalungile odokotela. Ayinayo nje yonke imisebenzi yendabuko ye-yoga mat, kepha futhi inomsebenzi wokusiza ukuholwa.
Ukusetshenziswa kwendwangu yelineni yoga
Isinyathelo 1: thola umugqa ophakathi wesiphambano
Sithatha umata welineni we-yoga obekwe phansi njengesilinganiso futhi ume maphakathi nomata. Kumata, kunomugqa ophakathi nendawo ophakathi nendawo kumata we-yoga. Lapho sizijwayeza izikhundla ze-yoga kumata, kufanele siqale sisebenzise lo mugqa ophakathi nendawo njengokujwayelekile.
Isinyathelo 2: Ukuqhathanisa okuqondile
Mat ubekwa phansi, futhi imigqa engaphambili icace bha phambi kwamehlo akho. Yini i-asana ofuna ukuyenza kuqala ukuthola uphawu lwangaphambili kumata, bese ulubeka ngokushesha nangokunembile endaweni ehambisanayo, bese wenza ukulungisa okuhle ngokuya kokuphefumula komzimba. Akumangalisi yini ukuthi umqeqeshi angayiqedela kahle i-yoga asana ngokwakhe!
I-Thick Flooring Puzzle Ukuzivocavoca Mat, Isikhwama Sokuhamba seYoga, I-Yoga Mat Enethawula Phezulu, Isikhwama se-Yoga Sling, Isikhwama seYoga Mat sokuhamba, iphazili yokuzivocavoca mat,